Hofaizina mafy ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly - Ao Raha 22 fevrier 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Hofaizina mafy ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly – Ao Raha 22 fevrier 2019
Tsy handefitra amina fisiana kolikoly intsony ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Nisongadina nandritra ny Filankevitry ny minisitra notanterahina teny amin’ny lapan’Iavoloha ny fandraisana fepetra hentitra hiadiana amin’ny kolikoly hotanterahin’ny fitondram- panjakana.
Voafaritra ao anatin’ ny fampitam-baovao avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, omaly, fa «fanatanterahana ny velirano napetraky ny Filohampirenena izao famongorana miainga eny ifotony ny kolikoly izao».
Fepetra iray lehibe sy vaovao horaisin’ny fitondram- panjakana manomboka izao ny fanasaziana an’ ireo mpiasam-panjakana tratra manao kolikoly. Ankoatra ny sazy ara-pitsarana dia hoesorina eo amin’ny toerany ireo mpanao kolikoly eny anivon’ireo sampandraha- raham-panjakana. «Asaina mamerina ny vola hatramin’ ny ariary farany nangalarin’ izy ireo izay tratra manao an’izany. Tsy hisy intsony izany ilay hoe mangalatra dia mitsotsotra sy mangatsiatsiaka rehefa avy manao ny tsy mety», hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana, izay sady mpitondra tenin’ ny governemanta nandritra ny tatitra nataony, tetsy Anosy, omaly.
Tsy hiandry ela fa efa hihatra avy hatrany amin’ ireo izay voaporofo ho nanao kolikoly ireo fepetra ireo, ka isan’izany ny momba ny raharaha teny amin’ ny seranam-piaramanidina teny Ivato, farany teo.
Taratasy sy fanadinam-panjakana
Nandraisana fepetra ihany koa ny fanaovana ireny taratasim- panjakana ireny. Hisy, araka izany, ny fametrahana karazana sampandraharaha manokana hanome torolalana an’ireo olom-pirenena hahafahana manamora ny fikarakarana an’ireo taratasim-panjakana ireo. «Ho ampahafantarina mialoha ny taratasy ilaina sy ny fotoana hahavitan’ izany, mba hisorohana ny fanaovana kolikoly. Ho arahi-maso akaiky izany ary ezahina ny hamitana azy ireny ao anatin’ny fotoana fohy. Hapetraka ao anatin’ny telo volana ireo sampandraharaha ireo», araka ny tatitra nataon’ny minisitra, Rakotondrazafy Lalatiana.
An-kilan’izay, ho fanadiovana ny fanadinana hidirana ho mpiasam- panjakana dia nomena malalaka ho afaka hitaky sy hijery ny naotiny ireo mpiadina. Manomboka izao dia azon’ireo mpiadina atao ihany koa ny mijery hatramin’ny taratasim-panadinana nanaovany fifaninanana. Isan’ny niteraka resa-be sy niteraka adihevitra goavana tamin’ iny taon-dasa iny, ohatra, ny fanadinana hiditra ao amin’ny Sekolim- pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha. Hihatra avy hatrany izany ity fepetra ity amin’io fanadinam- panjakana io. Nambaran’ny minisitra mpitondra tenin’ny governemanta fa tsy hitsitsy amin’ny fandraisana fepetra amin’ ireo trangana kolikoly eto amin’ny firenena intsony ny fitondram-panjakana manomboka izao.
Telo hatramin’ny dimy taona
Isan’ny fepetra noraisin’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry, nandritra ny Filankevitry ny minisitra, teny Iavoloha, ihany koa ny famerenana ny fotoam-piasan’ireo manam-pahefana sy mpiasam-panjakana ambony. Hoferana ho telo ka hatramin’ny dimy taona izany. «Tsy hisy intsony izany ireo tompon’andraiki-panjakana hijanona ela be eo amin’ny toerany. Na masoivoho io na mpitari-tafika na tompon’andraikitra ambony hafa. Hifandimbiasana, araka izany, ny toerana fa tsy ho giazana olona iray », arakany notaterin’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana hatrany, tetsy Anosy.
Article précédentAdy amin’ny kolikoly – Miainga amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena hoy SEM RAJOELINA Andry – Kolo TV 21 febroary 2019